Ii-Yats ze-Cajun-Creole zokutyela Ziyintandokazi yase-Indianapolis
Uphulo oluPhezulu olusenyangweni
Tyelela iWebhusayithi yabo
Indawo yokudlela yaseCajun-Creole, i-Yats ingqondo yeJoe Vaskovitch. Waza waza wakhula eNew Orleans, uJoe ungumfanekiso we-Indianapolis, owaziwa ngamandla akhe, umdla, kunye nezandla-kwi-style style. I-Yats ayikho i-frills, i-back-to-the basics, iindawo zokutya ezihlala kuyo ezihlakulele oku kulandelekileyo.
Izitya ze-Cajun-Creole izitya zinezityebi, zivumba, kwaye zizaliswa, kwaye ixabiso lilungile. I $ 5.50 nje ithengisa nayiphi na ingeniso kwimenyu, ikhonjwe ngeesibini zomtya wesonka.
Kwidola elingaphezulu, unokwenza i-combo, okanye i-buck ngaphantsi, unokufumana umyalelo wesiqingatha. Iiphunga kunye neendleko zokudada zongezelelweyo.
Imenyu, eboniswa kwibhodi emva kwekhawulithi, iguqula imihla ngemihla, izitya ezithandathu ukuya kweyeshumi ziyakwenziwa rhoqo ngosuku. Ukuba uhlamba isidlo esithile, ungafuna ukujonga amamenyu kwiindawo ezahlukeneyo ngaphambi kokuba uhambe.
Nangona imozulu ithi ukutya okukhawulezileyo, ukutya akunjalo. Ukutya okuphambili kwi-Yats yinkqubo yamanqanaba amaninzi, i-intricately mixing and simmering khetha i-Cajun iziqholo ukuze ufikelele ekugqibeleni.
I-Chili Cheese Etouffee kunye ne-Crawfish yi-Yats 'umthengisi ophezulu, kunye neJambalaya - umxube wemifuno, i-sausage, turkey, kunye neziqholo-kukuthengiswa rhoqo ubusuku bonke. Ezinye iinketho eziqhelekileyo ziquka:
I-Creole ye-Chicken: Imifuno kunye nenkukhu kunye ne-Joe isayinwe sauce ebomvu
I-Gumbo: I-sausage, inkukhu, isobho kunye ne-veggie isobho
I-Succotash: Isitya se-vegan kunye nobhontshisi obomvu, ingqolowa, i-okra kunye neetatayi
B & B: Ubhontshisi obumnyama, ingqolowa yomlambo kunye nelayisi kwi-sauce eluhlaza
Iibhontshisi ezibomvu kunye neRic nge-Sausage: 'U-Nuf uthe.
Isipinashi kunye neMushroom Etouffee: Ukukhetha okunempilo, okungenamzimba.
Ukuba ungayifumana indawo yokutya, ungakhetha kwi-Yats ye-Yan ye-peanut ye-cream ye-cream pie okanye uceke olukhethiweyo lwe-cheesecake.
Inkonzo iqalisa isitayela sokutya ngokukhawuleza kunye nabathengi abayalela nokuhlawula kwi-counter, baze baqhube phambili ekuthatheni i-napkins, izixhobo kunye nezixhobo zokuzikhusela. I-oda lakho lokutya, nangona kunjalo, linikelwa kwitafile yakho-oko kukuthi, unokufumana enye. Indawo yokuhlala yindawo encinci, engacwangciswanga, kwaye ngokuqhelekileyo ayikhohlwa. I-Yats incike kwiminikelo yayo yemenyu eyahlukileyo ukuze yenze ingcinga engapheliyo, kwaye yenza. Indawo yokutyela ithetha ngokunyanisekileyo phakathi kwabantu.
Ukutya ngumthendeleko kulabo abathandayo izitya zeCajun-Creole ezithembekileyo, kwaye kukude kakhulu nokutya okukhawuleza kokutya okugqithiseleyo kwe-burgers kunye nefries.
I-Yats inikeza iintlobo ezahlukeneyo ze-add-in-yourself sauces ezishisayo kwaye ukhethe iziqholo, ngoko unako ukongeza okungaphezulu okanye okuncinci njengoko ufuna izinto ezithandayo.
Ixabiso linzima kunzima ukulibetha, kwaye ekubeni zonke i-entrees zixabiso elifanayo, akudingeki ukuba wenze intengo ekukhethiweyo kwakho.
Indawo ihlala iqhutywe, kunye nezihlalo ezigxilwe emva kokubuya kunye nobumfihlo obuncinane. Oku akusiyo indawo yokutya esondeleyo.
Ngokungafani neendawo zokutyela ezinokuthi zizintlu zokutya, ukuba awukho umhlobo weCajun-Creole ukutya, awuyi kufumana nenye indlela ekhoyo kwimenyu - ayikho i-cheese echeyiweyo okanye iinkukhu ezikhoyo apha. Nangona kunjalo, ukuba awukho isidlo sokudla kunye nokucinga kokutya i-crawfish kukushiya uziva unyanzelekile (njengoko kwandenzayo, ekutyeleleni kwam kuqala) okanye ucinga ngamasiksi asekelwe kwitamatato njengengxowankulu kunedayisi, ngaphantsi ukhetho oluyingqayizivele - njengeB & B (endiyifumene ngokuzonwabisa kwindwendwe yam yesibili, kwaye ndiye ndagqithiselwa umva ukususela) - inzima kakhulu.
Indawo ye-Indianapolis Indawo
I-Yats ineendawo ezine zase-Indianapolis. Zonke iindawo zivuliwe ngoMon-Thu ukususela ngo-11 ukuya ku-9 ntambama no-Fri-Sat ukusuka ngo-11 ukuya ku-10 ebusuku. Iindawo ze-Street Street ne-College yee-96 zivuliwe ngeeCawa ukususela ngo-11 ukuya ku-7 ebusuku.
IiYats kwiKholeji: 5363 N. College Ave, ifowuni (317) 253-8817
I-Yats kwiMisa: 659 Massachusetts Ave, ifowuni (317) 686-6380
Yats kwi-96: 8352 E. 96th St., ifowuni (317) 585-1792
I-Yats e-Greenwood: 1280 US 31 North, i-Suite W, ifowuni (317) 865-9971
I-Yats inikeza isidlo esonelisayo semali, kunye nolunye uhlobo olwamkelekileyo lokutya okukhawulezayo kulabo bahlahlo-mali. Yindawo yokutyela enomndeni onokuzibona, kunye nokudibanisa okunzima ukubetha.
Iindawo zokutyela eziphezulu eziphezulu e-Indianapolis
Iindawo Kids Eat Simahla e-Indianapolis
I-Beef & Ibhodi yeeNkcazo zeDinari ye-2016 IShedyuli
Indawo yase-Indianapolis Indawo yokuPhepha
UFogo de Chao unikezela ukutya kwaseBrazil okuqhelekileyo e-Indianapolis
I-Indianapolis zokutyela Ivula i-Christmas Day
7 Iihostela ezinkulu eSan Telmo, eBuenos Aires
IiCape Top Wineries
Usuku lokuzimela lwasePeruvia
I-Whangaparaoa Peninsula, eNyakatho yeAuckland
7 Ukutya kufuneka ulinge kwi-Antigua
I-Zócalo Inkcazo kunye neMbali
I-Resto Végo: Ngaphezu kwama-Vegetarian nama-Vegan Dies Under Under One Roof
Ukuhlaziywa kweBonobo Bandra: I-Hip Jungle-Themed Bar e-Mumbai
Yintoni iSikole soMqulu?
IziTyelelo eziPhambili kunye noTyelelo kwiOahu
WorkAway 101: Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nomsebenzi
I-Tysons, VA Iinkcukacha zokuthenga: iiyure, izikhokelo kunye nokunye
Fort Point - Zonke izizathu omele uzibone
I-Hyatt Regency, iTrinidad